IBlockchain Luzokhulisa Kanjani Uguquko Emkhakheni We-E-Commerce | Martech Zone
NgoLwesithathu, Novemba 7, 2018 I-Ankit Patel
Njengokuthi ushintsho lwe-e-commerce lufike kanjani ogwini lwezitolo, lungela olunye ushintsho ngendlela yobuchwepheshe be-blockchain. Noma ngabe yiziphi izinselelo embonini ye-e-commerce, i-blockchain ithembisa ukubhekana nokuningi kwayo futhi yenze ibhizinisi libe lula kumthengisi nakumthengi.
Ukwazi ukuthi i-blockchain izoba kanjani nenzuzo enhle embonini ye-e-commerce, okokuqala, udinga ukwazi nge izinzuzo zobuchwepheshe be-blockchain nezinkinga ezikhungethe imboni ye-e-commerce.
Ziyini izinzuzo zobuchwepheshe be-blockchain?
I-blockchain iyi-database yama-ledger esatshalalisiwe. Okwenziwayo nedatha kugcinwa ngokuzenzekelayo ku-node yomhlanganyeli.
Ukuthengiselana okufanele kufakwe kwileja noma ibhulokhi kuvunyelwe abanye ababambiqhaza. Lokhu kuyenza ithembeke.
Okwenziwayo kungabhalwa kuphela ababambiqhaza abagunyaziwe abakwenze kuphephe futhi kuphazamise ubufakazi.
Ileja ibhalwe ngokufihliwe ngamanani ukuze idatha ihlale ivikelekile.
Ubudlelwano obuphakathi kwamabhulokhi bukwenza kungabi lula ukushintsha okuqukethwe kwebhulokhi.
Okwenziwayo noma idatha yisikhathi esigxiviziwe. Ngakho-ke ukuthengiselana kungalandelwa kufika osukwini lwayo lokuqala lokungena.
Izinkontileka ezihlakaniphile yilezo lapho ukuthengiselana kudalwa khona ngokuzenzakalela uma kuphela uma kuhlangatshezwana nesethi yezimo.
I-blockchain izoyiguqula kanjani imboni ye-e-commerce?
Ukukhokha kwenziwa kushibhile - Imali yokucubungula inkokhelo ekhokhiswa izinkampani zamakhadi namabhange iphakeme kakhulu. Ngaphezu kwalokhu, amapulatifomu e-commerce nawo akhokhisa imali evela kubathengisi nganoma yikuphi ukuthengiselana okwenziwe. I- Ubuchwepheshe be-blockchain isethwe ukwehlisa imali yokucubungula kanye nemali yokuthengisa ngokunikela ngemisebenzi ephansi. Izinga lokuphepha nalo lizophakama ukuze umthengisi akwazi ukuzuza kulo.
Ukulandelwa Kokuthengwa Kwezimpahla Nokulawulwa Kwezimpahla - Ukunikezwa kwezimpahla ezisuka kumthengisi kuya kwipulatifomu ye-e-commerce bese kusuka lapho kuya ekhasimende kuwumsebenzi oyisidina okufanele uphathwe. Umnyango wesitolo kufanele uhlole amasheya azofika nalezo okufanele zilethwe. Kungaba nenkinga yokukhwabanisa ngemikhiqizo engezansi ehlinzekwayo. Kepha ngobuchwepheshe be-blockchain, ipulatifomu ye-e-commerce ingalandelela ukuhamba kwempahla iye ngapha nangapha emagcekeni ayo. Futhi, njengoba idatha eqoshiwe isobala, noma yikuphi ukungafani ngobuningi noma ngekhwalithi kungalandelwa. Lokhu kuzoba usizo kumthengisi, ipulatifomu ye-e-commerce kanye nekhasimende.
Ukulawulwa Kokusungula - Enye yezinkinga kuwo wonke amabhizinisi ahlobene nomkhiqizo yileso sokulawulwa kwempahla. Izinto ezisesitokweni kufanele zigcwaliswe futhi ziphathwe. Lapha, i-blockchain ingasiza imboni ye-e-commerce ekuphathweni kwempahla. Ngokufaka izinkontileka ezihlakaniphile ku-blockchain, i-inventory ingalawulwa. Izinto zinga-odwa ngokuzenzekelayo kumthengisi lapho umkhawulo ochazwe ngaphambilini (umkhawulo omncane) ufinyelelwa. Lokhu kuqinisekisa ukuthi isitolo asinayo imikhiqizo eyeqile futhi ayihlali isitokwe.
Ukuphepha Kwemininingwane - Imininingwane eqoqwe yi- amapulatifomu e-commerce hlala ku-database yabo. Kepha ikhasimende lilahlekile ngoba le datha isetshenziswa kabi kaningi yilawa ma-e-commerce giants. Futhi, kukhona konke okungenzeka ukuthi isistimu iyagenwa futhi i-database iyantshontshwa. Imininingwane ebucayi efana nenombolo yekhadi lesikweletu kanye nemininingwane yomuntu isengcupheni. Amapulatifomu e-commerce awagcini kuphela imininingwane yamakhasimende kepha neyabathengisi bawo futhi. Kepha ngobuchwepheshe be-blockchain, idatha ikhona kuwo wonke ama-node wamakhasimende. Kuyisistimu esezingeni eliphansi futhi idatha ayinakushintshwa noma ilahleke.
Ukwethembeka Nemivuzo - Nge-blockchain, kuba lula ukulandelela ukuthengwa okuphelele okwenziwe yikhasimende kanye nabazuza amaphuzu abathembekile abazuzile. Umlando wokuthenga namaphoyinti atholakele futhi ahlengiwe agcinwa ngokuphepha kulejaja esatshalalisiwe ye-blockchain. Ukuvuzwa kwezaphulelo namaphuzu wephuzu kungasethwa ngokuzenzakalela ngezivumelwano ezihlakaniphile.
Amarisidi Namaresidi Wokuthenga - Ngokuthenga, kuza ikhanda lokugcina ngokucophelela ikhadi lewaranti kanye nerisidi lokuthenga. I-blockchain izoba umfutho wokugcina irisidi yokuthenga ukuze kutholakale izinsizakalo zewaranti. I-blockchain ingagcina kalula futhi ilandelele idatha ngaleyo ndlela ivumele ubufakazi bobunikazi bemikhiqizo noma izinsizakalo.
Ukubuyekezwa Kwangempela - Izibuyekezo ezenziwe epulatifomu ye-e-commerce zikhonjelwe ekubuzweni okuningi. Izitolo ze-e-commerce azivulelekile mayelana nezibuyekezo ezithunyelwe lapho futhi akekho onesiqiniseko sokuthi ngabe ziyiqiniso ngempela yini. Ngakho konke ukungaqondakali mayelana nokubuyekezwa, ubuchwepheshe be-blockchain busiza ukuxazulula inkinga yokubukeza. Kuyasiza ukuqinisekisa ukubuyekezwa futhi wazi ukuthi kungokoqobo futhi kuthembekile. Amakhasimende angakhuthazwa ukubhala ngemikhiqizo ayithengayo. Imivuzo, ngaphezu kwalokho, ingenziwa nge- izikhwama zedijithali ku-blockchain.
Ezinye izindlela zokukhokha - Amasayithi e-e-commerce ahlinzeka amakhasimende awo ngezindlela ezahlukahlukene zokukhokha njenge-COD, amakhadi nezikhwama zeselula. Kepha uma i-cryptocurrency yethulwa njengendlela yokukhokha, khona-ke inikeza izinzuzo eziningana kunezindlela zokukhokha zendabuko. Imodi yokukhokha iyashesha futhi ithembekile. Imali yokucubungula iphansi. Akukho ukwesaba ukuthi okwenziwayo kuzoguqulwa futhi kusetshenziswe kabi njengoba kwenzeka uma kukhokhwa ikhadi. Nge-cryptocurrency, isidingo sokuvunyelwa komuntu wesithathu siyasuswa.
Imboni ye-e-commerce incintisana kakhulu, kanti amawebhusayithi athengisa futhi e-commerce abheka izindlela nezindlela zokuhlala ngaphambi kontanga yabo. Ngakho-ke, amabhizinisi kufanele amukele ubuchwepheshe obuhlakani bebhizinisi ukuze bahlale befanele emncintiswaneni.
Ubuchwepheshe be-blockchain buhlinzeka ngohlaka olufanele lokwenza izinto zibe lula futhi zibushelelezi. Ngobuchwepheshe be-blockchain, bonke ababambiqhaza embonini ye-e-commerce nakanjani bazosizakala ngokuhamba kwesikhathi.
Tags: enye inkokheloblockchaincryptocurrencyData Securitye-commerceizinkokhelo ze-ecommerceukulawula izimpahlaukwethembekaizindlela zokukhokhaukuthenga amarisidiIzibuyekezoumvuzoukuthengiswa kwezintoiziqinisekiso
U-Ankit Patel uyiMarketing / Project Manager ku I-XongoLab Technologies futhi PeppyOcean, ezinikezela ngezixazululo zewebhu ezisezingeni eliphakeme nezokuthuthukiswa kohlelo lokusebenza emhlabeni jikelele. Njengokuzilibazisa, ubhala ngobuchwepheshe obusha nobuzayo, ukuthuthukiswa kwamaselula, ukuthuthukiswa kwewebhu, amathuluzi wokuhlela, kanye nebhizinisi nokwakhiwa kwewebhu.
Ipulatifomu Yezinsizakalo Zokuqukethwe ze-GRM: Ukuletha Ubuhlakani Kuzinqubo Zebhizinisi Lakho